Sijabule njalo ukusiza. Thepha ukuthola imininingwane engezansi.
Izindaba, Izaphulelo kanye Updates
I-imeyili noma i-2 ngonyaka nezindaba ngezibuyekezo, imikhiqizo emisha nezaphulelo. Chofoza ukuze ubhalise.
Ulahlekile noma awutholanga ukhiye wakho welayisense
Okhiye belayisense bahlala be-othomathikhi futhi bathunyelwa ngokushesha ku-imeyili yakho. Uma ungayitholi isefolda yakho yogaxekile, kungenzeka ukuthi uyipelile kabi noma kungenzeka usebenzise elinye ikheli le-imeyili.
Kunoma ikuphi, buyela emuva esitolo ukuze ubone ama-oda akho, okhiye belayisense bese ushintsha i-imeyili yakho nezinye izilungiselelo noma usebenzise i- Buyisa Ilayisense ikhasi ukuze wonke amakhi okhiye wakho welayisense athunyelwe nge-imeyili kuwe.
Imibuzo yokuthengisa kuzinhlelo zokusebenza ezithengwe ku-Apple noma ku-Google
Q: Uma ngisuse uhlelo lwakho lokusebenza noma ngathola ifoni entsha, ngingaluthola kanjani uhlelo lokusebenza futhi?
A: Iphinde uyilande usebenzisa i-ID noma i-imeyili efanayo owathenga ngayo uhlelo lokusebenza ekuqaleni. Thepha kuzixhumanisi ukuze ufunde ukuthi ungalanda kanjani kabusha uhlelo lokusebenza owuthenge kulo Isitolo se-Apple iTunes noma kusukela Isitolo se-Google Play. Uma uzibuza ukuthi ngabe uluthengile yini uhlelo lokusebenza ungabheka amarisidi akho ku-Apple App Store noma ku-Google Play.
QNgithengile uhlelo lwakho lokusebenza. Ngiwuthola kanjani irisidi, ngihlole imali, ngibuze imibuzo yokuthengisa?
A: Xhumana ne-Apple App Store noma i-Google Play, noma yikuphi lapho uthenge khona. Asikwazi ukusiza ngokuthengisa kodwa singakusiza ngosizo lobuchwepheshe lwezinhlelo zethu zokusebenza.
Q: Uma ngivele ngashintsha kusuka ku-Android kuya ku-iPhone noma i-iPhone kuya ku-Android ngilushintsha kanjani uhlelo lokusebenza mahhala?
A: I-Apple neGoogle balawula konke ukuthengisa futhi abahlinzeki ngendlela yokwenza lokho.
Ubuningi, Amalayisense Esiza Nezemfundo
Isitolo sethu sinikeza ngokuzenzakalela amanani entengo afinyelela kumakhophi ayi-100. Chofoza lapha ukuya esitolo sethu ukuthenga ngobuningi.
Ukuze ufanelekele amanani entengo emfundo, KUFANELE ube ngumsebenzisi ofanelekile wokufundisa:
Isikhundla, abasebenzi noma umphathi, okwamanje uqashwe esikoleni esigunyaziwe se-K-12 noma esikhungweni semfundo ephakeme, ngekheli le-imeyili elivumelekile.
Abafundi abakhona okwamanje ubhalise esikhungweni semfundo ephakeme esivunyelwe, nekheli le-imeyili elivumelekile.
Ngeminye imibuzo yokuthengisa neyezintengo sicela Xhumana nathi.
Imigomo Yelayisense Yohlelo Lokusebenza
Ilayisensi ikuvumela ukuthi ufake futhi usebenzise uhlelo lokusebenza kunoma iyiphi ikhompyutha okungeyakho noma oyilawulayo ukuze uzisebenzisele yona. Uma uhlelo lokusebenza luzosetshenziswa abanye abantu kwamanye amakhompyutha adinga ilayisense yalo.
Lapho izibuyekezo zinokuthuthuka okuncane nokulungiswa (isb. Ukulungiswa kwamaphutha, kusuka kunguqulo 2.0 kuye ku-2.3, njll.), Zihlala zikhululekile kubasebenzisi abanelayisense.
Ukuthuthukiswa okukhulu kwezinhlelo zokusebenza kuza njalo eminyakeni emi-2 noma kunjalo. Ukuthuthuka ngaleso sikhathi kuvamise ukuba ngama-50% esephulelo sentengo ejwayelekile yabathengi bangaphambilini. Ukuvuselelwa kufaka phakathi ukusekelwa kwesoftware nobuchwepheshe eminyakeni emi-2 elandelayo.
IPlum Amazing inikela ngezinhlobo zesilingo ezisebenza ngokugcwele zayo yonke isoftware ongayisebenzisa ukuhlola ukufaneleka kwayo kwezidingo zakho ngaphambi kokuyithenga, zonke izicelo zokubuyiselwa imali zihlolwa ngamacala ngamacala futhi zingahle zibe nemali ephansi engu-15% yokucubungula . Ukucela ukubuyiselwa imali, sicela uxhumane nomnyango wethu wokuthengisa kungakapheli izinsuku ezingama-30 uthenge.
Chofoza lapha ukuthola ikhasi lethu lokuxhumana lobuchwepheshe, ukuthengisa nayo yonke eminye imibuzo.